चिकित्सा क्षेत्रलाई माफियामुक्त बनाऊ::Nepali News Portal from Nepal
चिकित्सा क्षेत्रलाई माफियामुक्त बनाऊ
निजी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा छन् । नेशनल मेडिकल कलेज वीरगञ्ज, युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवा, गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरा, चितवन मेडिकल कलेजलगायतका कलेजले शुल्क बढी लिएको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा छन् । चर्को शुल्क घटाउनु पर्ने मागसहित आन्दोलित उनीहरुलाई मेडिकल संचालकहरुले धम्की दिएको खबर सार्वजनिक भएको छ । सरकारले तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क फिर्ता गर्न १५ दिने अल्टिमेटमलाई ती कलेजहरुले टेरपुच्छर लगाएनन् । अल्टिमेटम सकिएसँगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मेडिकल कलेजहरुलाई कारवाही गर्ने उद्घोष गरेका छन् । मेडिकल माफियाको चंगुलमा सरकार र र दलहरु फसेकाले कारवाही नगरेसम्म उनको कुरा पत्याउने आधार छैन । मेडिकल काउन्सीलमा माफियाहरुलाई नै नियुक्ती दिइएको छ । कतिसम्म भने नेपाली सेनाले संचालन गरेको कलेजले समेत सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको भेटिएको छ । चिकित्सा क्षेत्रमा देखिएको यो विकृति अन्त्यको लागि डा. गोविन्द केसीले पटक–पटक अनसन बसे । सरकारले उनीसँग सम्झौता पनि ग¥यो । तर, त्यो सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यतिबेला मेडिकल काउन्सीलमा डा. भगवान कोइराला आएका छन् । उनले चिकित्सा क्षेत्रमा देखिएको विकृति अन्त्यको पहल थाल्ने बताएका छन् । विकृति अन्त्यको लागि समस्याको जरोसम्म पुग्ने हिम्मत उनले देखाउनै पर्छ ।
अहिले देशमा २० वटा मेडिकल र ६ वटा डेन्टल कलेज छन् भने १७ वटा कलेजले मनसायपत्र लिएका छन् । हिजो राजनीतिक दवाबमा नेपालमा पूर्वाधार नहुँदा नहुँदै पनि मेडिकल कजेजहरु दर्ता भए । ति मेडिकल कलेजले पढाउने डाक्टर बोकेर मेडिकल काउन्सिलको आँखामा छारो हालेका समाचारहरु पनि सार्वजकिन नभएका होइनन् । नेपालमा संचालित मेडिकल कलेजहरुको गुणस्तरीयता खस्केको कारण पनि यही हो । मेडिकल कलेजको स्वीकृति दिने र अनुगमन चाहिँ नगर्दा समस्याले विकराल रुप लिन पुगेको हो । यस अघि मेडिकल कलेज सम्बन्धि छुट्टै विश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने सहमति र नेसनल हेल्थ प्रोफेसन एजुकेसन पोलिसी कमिसन गठन भई काम गरिरहेको अवस्थामा कसैको दवाबमा मेडिकल कजेजलाई स्वीकृति दिनु भनेको सरकार आफैले गरेको निर्णयबाट भाग्नु हो । नेपालको चिकित्सा क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । बेलायत जस्तो देशमा अहिले मात्र ३२ वटा मेडिकल कजेलहरु रहेको तथ्यले पनि चिकित्सा शिक्षालाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ । जबकि बेलायतको चिकित्सा क्षेत्र ३ सय वर्ष पुरानो मानिन्छ । त्यहाँको उपचार पद्धति संसारकै उत्कृष्ट मानिन्छ । नेपालमा भने मेडिकल कलेज खोल्ने र गुणस्तरीयतामा ध्यान नदिने समस्या रहेको छ ।
एउटा राम्रो मेडिकल कलेजको लागि ७ सय शैयाको अस्पताल,२ सय ४० चिकित्सक र उपकरणहरु चाहिन्छ । तर, नेपालमा भने कुनै पनि कलेजले ति मापडण्ड पूरा गरेका छैनन् । अहिले चिकित्सा शिक्षा पनि व्यापारिकरणको मारमा परेको छ । देशलाई योग्य चिकित्सकको खाँचो छ । चिकित्साशास्त्र अध्ययनको लागि सयौँ विद्यार्थी देश बाहिर गएका पनि छन् । त्यो पूँजी रोक्न र डाक्टर उत्पादन गर्ने दिशामा अगाडि बढ्दा शिक्षामा व्यापारिकरण भने गर्नु हुँदैन । जथाभावी सम्बधन दिने प्रवृत्ति रोक्नैपर्छ । माफियाको प्रभावमा परेर चिकित्सा क्षेत्रलाई तहस नहस पारियो भने त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ । कम्तिमा अहिले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क फिर्ता गराउने हिम्मत सरकारले गर्नैपर्छ । त्यतिले मात्र पनि पुग्दैन । यो क्षेत्रलाई माफियाबाट मुक्त गराउन बिस्तारै अन्य सुधारका कार्यक्रम पनि चाल्नैपर्छ ।